Ahlu-Sunnah wal Jamaaca oo sheegay inay ciidankooda heegan buuxa geliyeen
Maamulka Culumaa'udiinka Ahlusuna ee Gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay heegan buuxa gelisay Ciidamadeeda, kadib shir todobaad uga socday magaalada Dhuusa mareeb ee xarunta gobolka.
Bayaan dhowr qodob ka kooban oo laga soo saaray shirka u socday Madaxda Ahlusuna ayaa lagu sheegay in ciidamada Ahlusuna laga qeyb gelinayo ciidamada kala duwan sida, Nabadsugida, Booliska, Asluubta iyo Milateriga.
Sheekh Axmed C/llaahi Ilkacase oo ka mid ah saraakiisha sar sare ee Ahlusuna oo bayaanka saxaafada u aqrriyay ayaa baaq u diray dowladda Soomaaliya, isagoo xusay in gobolada dhexe ay u soo dirto wafdi u kuur gala xaalada ammaan ee gobolka.
Qodobada ka soo baxay bayaanka ayaa waxaa ka mid ahaa , In heegan buuxa la geliyo Ciidamada Ahlusuna ee Gobolada Dhexe, in Ciidamada loo dhiso eybaha kala duwan ee ciidamada,s ida Boolis, Milateri, Nabadsugid iyo Asluub, In la dhameystirayo dhamaan maamulada deegaanada Ahlusuna ka arrimiso, iyo in loo diyaar garoobo dhismaha maamul goboleedka Gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Dhinaca kale Sheekh Axmed Ilkacase ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab in maalin walba ay gobolada ku dilaan ilaa 10-qof oo ay gowracaan, isla markaana ay si arxan daro ah ay u dilaan dadka rayidka ah, sida uu yiri.
Shirka Culumaa'udiinka Ahlusuna ugu soo gaba gaboobay Dhuusa Mareeb ayaa ahaa mid gogol xaar u ahaa shirar qorshihiisa yahay in maamul goboleed loogu dhiso gobolada dhexe, inkastoo Xukuumada Soomaaliya ay shaacisay in maamulo u sameyneyso gobolada dhexe.
Ahlusuna Wal-jameeca ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in ciidamadeeda ku biirineyso Ciidamada dowladda, si ay xuquuqdooda u helaan, iyadoo tallaabadan ka dambeysay markii Xubnaha sar sare ee Ahlusuna ay Muqdisho kula kulmeen madaxda dowladda.